जिल्लामा धमाधम एकताले केन्द्रमा दबाब, देशैभरी नयाँ ध्रुवीकरण - Everest Dainik - News from Nepal
जिल्लामा धमाधम एकताले केन्द्रमा दबाब, देशैभरी नयाँ ध्रुवीकरण
टिप्पणी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पूर्व माओवादी र एमालेका सबै संगठन तहमा अझै एकीकरण हुन सकेको छैन । खासगरी पोलिटब्यूरो र जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषय अहिले पेचिलो बनेको छ ।
गत साता तीनपटकसम्म सचिवालयको बैठक बसेपनि यसबारेमा टुंगो नलागेपछि कार्यकर्ता पंक्तिमा थप निराशा छाउन पुगेको छ ।
तर यही बीचमा देशैभरीका बिभिन्न जिल्लाहरुमा भने एकीकरणले तीब्रता लिएको छ । जिल्ला इन्चार्जको विषयमा अझै कार्यविभाजनको टुंगो नलागेपनि जिल्ला अध्यक्षसहित जिल्ला कमिटि बन्ने क्रमले भने तीब्रता लिएको छ ।
जिल्ला एकीकरणका क्रममा भने अधिकांश जिल्लाहरुमा सहमति नै देखिएको छ । दुबै तर्फका सयौं कार्यकर्ता र नेता व्यवस्थापन गर्ने क्रममा केही स्थानमा व्यक्तिगत असन्तुष्टि देखिएपनि जिल्ला तहमा भने एकीकरण सहजताका साथ अघि बढेको छ ।
जिल्लामा नयाँ एकीकृत पार्टीले पूर्ण आकार लिने क्रमले केन्द्रमा टुंगिन बाँकी विषय तत्काल पुरा गर्र्नै पर्ने दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ । जिल्लासँगै मातहतका स्थानीय तहको संरचना समेत केही समयमा नै पुरा हुने संकेत जिल्ला एकीकरणले देखाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस नेकपाको सम्पत्ति तीन अर्ब बढी, कहाँ कति छ अचल सम्पत्ति ?
नेकपा माओवादी केन्द्रमा जिल्ला र माथिल्लो निकायमा स्पष्टतः गुटहरु अस्तित्वमा नरहेपनि पूर्व एमालेभित्र माधव नेपाल, केपी ओली, वामदेव गौतम र झलनाथ खनाल समर्थकहरुका समूह अस्तित्वमा रहेका छन् । माओवादीभित्र प्रचण्डकै राजनीतिक कार्यदिशा र लाइन अनुसार जिल्ला तहसम्म एकल समूह रहेको अवस्थामा अहिलेको जिल्ला एकताले पूर्व एमालेभित्रका गुटहरु समेत भत्किनैपर्ने दबाब झेलिरहेका छन् । यसले गर्दा अब सबै जिल्लामा नयाँ ढंगको ध्रुवीकरण हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पूर्व एमालेभित्रका सबै जसो समूहसँग विचार र कार्यशैलीका आधारमा समान सम्बन्ध विकास गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा पूर्व एमालेभित्रका कतिपय समूहहरु फ्यूजन हुनैपर्ने बाध्यतामा छन् । यसले पार्टीभित्र नयाँ उर्जा र नयाँ प्रकारको गुटरहित संगठन निर्माणमा बल पुर्याउने देखिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस नेकपालाई नयाँ दल दर्ता गर्न फेरि झमेला !
कतिपय स्थानमा अहिले एकता प्रक्रियामा समेटिन नसकेका दुबै पूर्व पार्टीका कार्यकर्ताहरुको नयाँ समूहले समेत जन्म लिने देखिन्छ । यद्यपी यी नयाँ समूहहरु पार्टीले स्पष्ट कार्यदिशा र संगठनात्मक संरचना हासिल गरेसँगै प्रभावी भने हुने छैनन ।
जिल्ला र स्थानीय तहको एकीकरण टुंगिने अवस्था सिर्जना हुनु तर केन्द्रमा भने जिम्मेवारी बाँडफाँडमा अझै रडाको मच्चिनुले पार्टीले गति लिन केही समय भने लाग्ने देखिन्छ । यद्यपी प्रधानमन्त्री फर्के लगत्तै यस विषयमा गृहकार्य हुने नेकपा नेताहरुले बताएका छन् ।
पार्टीमा तल्लो तहसम्म एकता नहुँदा र कार्यविभाजन नहुँदा यसको सोझो असर पार्टीको लोकप्रियता र सरकारको प्रभावकारितामा समेत परेको निश्कर्ष अधिकांश नेता कार्यकर्ताको छ । त्यसैले एकताको कार्यभार छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने दबाब नेतृत्वलाई परेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले एकताको काम तत्काल टुंग्याएर देशैभरी महाजागरण अभियान सञ्जालन गर्ने कुरा बारम्बार व्यक्त समेत गर्र्दै आएका छन् ।
केन्द्र, जिल्ला, स्थानीय तह, प्रवास र सबै जनवर्गीय संगठन तथा विभागहरुको पूर्ण एकता भएपछि महाधिवेशनको तयारीमा जुटने फुर्सद नेताहरुले हुने छ । यसपालिको महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन भएकोले पनि विशेष महत्वको हुने देखिन्छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुई फरक वैचारिक धारबीचको यो एकताको मुख्य आकर्षण भावी कार्यदिशा र नेतृत्वको चयन नै हुने देखिन्छ । तर एकता प्रक्रियाले ढिलाई गर्ने अवस्थामा भने महाधिवेशन समेत निकै ढिला हुने र यसले पार्टीलाई क्षति पुर्याउने सम्भावना समेत उत्तिकै छ ।